धादिङमा निषेधाज्ञा सुरु : के खुले ? के बन्द भए ?
बिहिबार, वैशाख २३, २०७८ ०८:४९:४० युनिकोड
लकडाउनमा ग्याँसको अभाव हुँदैन : निगम
धादिङ,२१ बैशाख ।
धादिङमा आज बिहान ६ बजेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ । शनिबार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) को बैठकले विश्वभर फैलदै गएको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड १९ महामारी रोकथामका लागि आजदेखि ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै आज बिहान ६ बजेदेखी ३१ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू भएको हो ।
निषेधाज्ञा अवधिमा खाद्य सामग्री पसल बिहान ६ बजेदेखी ९ बजेसम्म खुल्नेछन् । साथै औषधी पसल लगाएतको अत्यावश्यकीय पसलहरु जुनसुकै बेला संचालन गर्न पाईने छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी र भेलामा रोक लगाइएको छ । सपिङ मल, सिनेमा हल, जिमखाना,सैलुन र व्युटीपार्लर जस्ता भिडभाड हुने व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
यस अवधिमा सबै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अन्य अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् । ती कार्यालयका कर्मचारीले परिचपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा विवाह ब्रतबन्ध र मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छैन । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी ती कार्यमा १५ जनासम्म सहभागी हुन प्रशाशनले आग्रह गरेको छ ।
खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीका सवारी साधन सञ्चालन हुनेछन् ।
त्यस्तै खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका ढुवानीका साधन पनि सञ्चालन हुने आदेशमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयका गाडी सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
धादिङमा सक्रिय केश पाँचसय नाघ्यो,थप १५ जनालाई संक्रमण २ घण्टा पहिले
वरिष्ठ गायक प्रेमध्वजको निधन Dhading Sanchar
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले कोरोना उपचार खर्च पाउने सोमबार, वैशाख २०, २०७८